Nagarik News - सेक्स स्टेसन
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट एरियाको माग गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो।
पूर्वका प्रमुख शहर र बजारमा सर्वत्र स्थापना भइरहेका छन्, सेक्स स्टेसनहरू। यस्ता स्टेसनका पारखी छन्, रिक्साचालकदेखि ठूला व्यापारीसम्म। पूर्वको यौन व्यवसायको ताजा हाल बुझ्न गोपाल दाहालले पूर्वका थुप्रै यौन अखडा चहारेका छन्।
भारत र पूर्वी नेपालको नाका हो, झापाको काकडभिट्टा। भारतको सिलिगुढी हुँदै दार्जीलिङ, सिक्किम जाने र सीमाबाट नेपालतर्फ आउने गाडी स्टेसन छ, त्यहाँ। तर पछिल्ला दिनमा त्यो गाडी स्टेसन भन्दा बढी 'सेक्स स्टेसन' का रूपमा परिचित छ। नेपाल र भारतका मात्र होइनन्, बंगलादेशका नागरिकसमेत जमघट हुने यो ठाउँमा खुल्लमखुल्ला यौनधन्दा चल्ने गर्छ।
काकडभिट्टाबाट सुरु हुने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जति अघि बढ्दै जान्छ, त्यति नै 'सेक्स स्टेसन'को संख्या बढ्दै जान्छ। काकडभिट्टाबाट अगाडि बढेपछि आइपुग्ने बिर्तामोडको बसपार्क क्षेत्र पनि सेक्स स्टेसन बनेको छ। त्यहाँका अधिकांश रेस्टुरेन्ट र होटलमा यौनधन्दा हुन्छ। २०६८ चैत २२ गते बिर्तामोडको नयाँ बसपार्कस्थित पूर्वाञ्चल सेकुवा कर्नरमा एक जनाको हत्या भयो। उनको हत्यामा यौनधन्दा पनि जोडिएको थियो। बिर्तामोड अगाडिको दमक पनि अर्को नामुद सेक्स स्टेसन हो। यहाँ पनि भारतदेखिका व्यापारी, यात्राका लागि आउने घुमन्तेहरू यौनआनन्द लिन आइपुग्छन्। पूर्वका गाउँहरूबाट शहर झरेका चेली र केही भारतीय युवती पैसासँग शरीर साटिरहेका हुन्छन्। केही दिन अघिमात्र प्रहरीले यौनधन्दा चलाएको आरोपमा दमकका चार होटल सञ्चालकसहित १७ जनालाई पक्राउ गर्योह। प्रहरीका अनुसार दमकमा प्रियंका होटल, ओझा होटल, सौगात, डल्पि्कनलगायत रेस्टुरेन्ट यौनधन्दामा कहलिएका छन्। दमक–९ को ममता होटलमा यौनधन्दा हुन्छ। दमकका डीएसपी रविकुमार पौडेल अहिले दमकलाई यौनधन्दा मुक्त बनाउने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्। बिर्तामोडका पत्रकार रमेश समदर्शीको टिप्पणी छ– 'सबैतिर नयाँ प्रहरी प्रमुख आउँदा उनीहरूको पहिलो टार्गेट नै होटलका यौनधन्दा हुने गर्छन्। तर, दुईचार दिनमै अभियान सेलाउँछ।'
त्यसो त झापाबाट इलाम हुँदै पाँचथर, ताप्लेजुङसम्मको यात्राका क्रममा पनि भेटिन्छन्, सेक्स स्टेसनहरू। आर्मी क्याम्पनजिकैको चारआली गाडी स्टेसनवरपरका होटलहरूमा सेक्स वर्करहरू रहेका छन्। उनीहरूका ग्राहक आर्मी, पुलिस, ठेकेदार र व्यापारीहरू हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। त्यहाँबाट उकालो चढेपछि चियाबारीमा मायाप्रेम साट्ने जोडीहरू बढी भेटिन्छन्। तर, इलामको फिक्कलमा चाहिँ बाहिरबाट सल्लाह मिलाएर गएका जोडी भेटिन्छन्। त्यहाँ पनि यौनकर्मी उपलब्ध छन्। इलाम बजारका होटलहरूमा पनि यौन पर्यटक थुप्रै भेटिन्छन्। इलामबाट पाँचथर जाँदा बाटोमा पर्ने कान्छी दोकानलगायत बजारमा फाट्टफुट्ट यौन अखडा भेटिन्छन्। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम त पहाडी क्षेत्रको गतिलो सेक्स स्टेसन नै हो। एक वर्षअघि प्रहरीले फिदिमको सीमा होटलमा छापा मारेर तीन जोडी युवायुवती पक्राउ गरेको थियो। ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित बस स्टेसनवरपर पनि सेक्सका अखडाहरू जमिरहेका स्थानीयवासी बताउँछन्।
पथरीबाट अगाडि बढेपछि आइपुग्ने इटहरी राजमार्गको मात्र होइन, पूर्वकै चर्चित सेक्स स्टेसन हो। पूर्वका सबै मुख्य बजारबाट विभिन्न शहर र राजधानी आउने जाने गाडीहरूको ठूलो स्टेसन हो इटहरी। यौनधन्दामा पनि यो अगाडि छ। यहाँको बसपार्कका अधिकांश होटल, रेस्टुरेन्टमा यौन कारोबार हुन्छ। बसपार्कबाहेक विराटनगर लाइन, पूर्व र पश्चिम लाइन सबैतिर खोलिएका साना छाप्रा रेस्टुरेन्टको मुख्य काम यौनधन्दा हो। केही महिनाअघि विराटनगर लाइनको फ्रेन्डसिप रेस्टुरेन्टबाट भागेर महिला अधिकारकर्मीको शरणमा पुगेकी एक युवतीले रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले ग्राहकसँग १५ सयसम्म लिने र आफूलाई दुई सय रुपैयाँ दिने गरेको बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, 'यहाँ पुलिसहरू पनि आउँछन्। उनीहरूलाई सित्तैमा सेवा दिनुपर्छ। उल्टै, नांगो बनाएर फोटो खिच्छन्।' महिला अधिकारकर्मीको उजुरीपछि प्रहरीले सञ्चालकलाई कारबाही गरेको थियो। यसबाहेक पनि प्रहरीले सयौँलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिसकेको छ। इटहरीका डीएसपी विद्यानन्द माझीका अनुसार गत वर्षको चैतदेखि यस वर्षको भदौसम्ममा यौनधन्दामा संलग्न १ सय ६० जना कारबाहीमा परिसकेका छन्। उनका अनुसार इटहरीमा काठमाडाँैदेखिका यौनव्यवसायी आएर ग्राहकलाई सेवा दिन्छन्। अधिकांश ग्राहक भारतीय हुन्छन् भने स्थानीय ग्राहक पनि उत्तिकै हुन्छन्। 'हामीले नियन्त्रणका लागि अभियानै चलायौँ,' डीएसपी माझीले भने, 'होटल व्यवसायी र आमा समूहसँग मिलेर आचार संहिता लागू गरेपछि पहिलेभन्दा नियन्त्रण भएको छ।'
इटहरीको गोरखा डिपार्टमेन्ट अगाडिको गाडी स्ट्यान्डदेखि नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना क्याम्पसम्मका छाप्रा रेस्टुरेन्टमा पनि यौनधन्दा चम्किएको छ। यहाँका मुख्य ग्राहक सेनाका जवान, गाडी चालक, रिक्सा र ठेलाचालक हुन्छन्। त्यसअगाडि सेकुवा बजारका रूपमा विकास भएको तरहरामा पनि फाट्टफुट्ट यौनधन्दा चल्छ।
त्यसपछि आइपुग्ने पूर्वको सुन्दर शहर धरानको भानुचोकस्थित बसपार्क, शान्तिपथ र छाताचोकनजिकै चतरा लाइन, जिरो प्वाइन्ट, फुस्रे, अमरहाट, बेसक्याम्पका केही होटल, रेस्टुरेन्टमा यौनधन्दा चलिरहेको छ। धरानबाट भेडेटार जाने उकालो बाटोमा पर्ने सारंगा डाँडामा रहेका होटल–रेस्टुरेन्टमा पनि यौन सेवा उपलब्ध छन्। यहाँको डुकु रेस्टुरेन्ट परिचित यौन अखडा हो।
पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटारका धेरैजसो होटलहरू दिनमा एउटै कोठा पाँच, सात पटकसम्म भाडामा लगाउँछन्। यस्ता 'घण्टे होटल'हरू भेडेटारदेखि धनकुटा जाने बाटोसम्म भेटिन्छन्। धनकुटा, हिले र वसन्तपुर पनि यौनपर्यटकका सेक्स स्टेसन हुन्। आर्मी क्याम्पनजिकै भएको चिसो ठाउँ हिलेका छाप्रे होटलहरूमा यौन जोडीको बास हुन्छ।
इटहरी नजिकैका खनार, दुहबी, पकली, झुम्का, इनरुवादेखि कोशी ब्यारेजसम्म स–साना सेक्स स्टेसनहरू छन्। 'एकान्त', 'भेटघाट', 'स्विट' जस्ता नाम राखिएका रेस्टुरेन्टहरू मूलसडककै छेउछाउमा भेटिन्छन्। यिनीहरूका मुख्य ग्राहक भनेका चालकहरू हुन्। एक जना ट्रक ड्राइभर भन्छन्, 'यस्ता रेस्टुरेन्टमा रक्सी, मासु र केटी पाइन्छन्। गाडी चलाउँदा थाकिन्छ। त्यहाँ पसेपछि भोक पनि मेटिने, प्यास पनि मेटिने। पैसा चाहिँ सखाप।'
कोशी तरेपछि सप्तरी जिल्ला भेटिन्छ। सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजका छाप्रा र होटलहरूमा पनि यौनधन्दा चल्छ। प्रहरीका अनुसार यसबाटै केही गरिब महिलाहरूको जीवनयापन चलेको छ। त्यस्तै उदयपुरको गाईघाट बजार पनि पहाडी क्षेत्रको ठूलो सेक्स स्टेसन हो। गाईघाटमा यौनव्यवसाय गर्न भोजपुर, खोटाङ, सप्तरी र सिरहादेखिका युवतीसमेत आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले होटलमा छापा मारेर पटक–पटक यौनधन्दा गर्नेलाई पक्राउ गरेको छ।
सिरहाको लहान बजारस्थित हस्पिटल चोक अर्को सेक्स स्टेसन हो। यहाँका न्यू राज होटल, ब्लुस्टार, आशिकी होटल एन्ड लजमा धन्दा चल्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। लहानमा पनि प्रहरीले छापा मारेर दर्जनौँलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सर्लाहीका मलंगवा, नवलपुर, लालबन्दीलगायत साना बजारमा पनि थुप्रै सेक्स स्टेसन छन्। यहाँ खुलेका रेस्टुरेन्ट तथा लजहरूका अधिकांश ग्राहक गाडी चालक हुन्। स्थानीय व्यापारी र केही बाहिरबाट आउनेहरू पनि हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। जनकपुरको जनकचोकलाई त स्थानीयवासी 'रेडलाइट एरिया' भन्ने गर्छन्। उनीहरूका अनुसार यहाँका धेरैजसो लज यौनधन्दाकै लागि खोलिएका छन्। ढल्केबर, लालगढ, बर्दिवास, चन्द्रनिगाहपुर हुँदै पथलैयासम्ममा गाडी चालकहरूलाई खाना, बस्नसँगै यौन सेवा दिने ठाउँ प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसपछि पुगिने हेटौँडालाई त गाडीको लोड बिसाउनेमात्र होइन, यौन तिर्खा मेटाउने शीतल चौतारी भने पनि हुन्छ। हेटौँडामा काठमाडाँैदेखिका यौनकर्मीहरूको समेत जमघट हुन्छ। तीन सयको हाराहारीमा यौनकर्मी रहेको अनुमान गरिएको हेटौँडामा प्रहरी र एनजीओ आईएनजीओले यौनकर्मीको निगरानी गरिरहेका छन्।
चितवनलाई पूर्व र पश्चिम सबैतिरको केन्द्रीय सेक्स स्टेसन भने पनि हुन्छ। चितवनका रत्ननगर, नारायणगढदेखि मौवाखोलासम्म साना–ठूला सेक्स स्टेसन सञ्चालित छन्।
देशका मुख्य बजार र बसपार्क क्षेत्रमा सेक्स स्टेसन सञ्चालन हुन्छन् भन्ने जानकारी प्रहरीलाईभन्दा बढी अरू कसलाई होला? कुनै शहरमा नयाँ प्रहरी प्रमुख आउनेबित्तिकै उसको पहिलो काम त्यस क्षेत्रका यौनक्रियाकलाप गर्ने होटलमा छापा मार्ने र मान्छे पक्राउ गर्ने हुन्छ। झापा, दमकका डीएसपी रविकुमार पौडेलले जस्तै सबैतिरका प्रहरी प्रमुखले यसलाई काम देखाउने अवसरका रूपमा लिएका हुन्छन्। दमकका होटलमा छापा मारेर पक्राउ गरेपछि होटल व्यवसायीहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। धेरै ठाउँमा त प्रहरीविरुद्ध होटल व्यवसायीले आन्दोलनै गरेका छन्। प्रहरी र होटल व्यवसायीको यस्तो जुहारी छ महिनाजति चल्छ। 'त्यसपछि कतै नियन्त्रण पनि हुन्छ,' एक व्यवसायीले भने, 'कतै प्रहरीको 'लाइन' मिल्छ अनि बन्द हुन्छ, छापा मार्ने काम।'
इटहरीका डीएसपी विद्यानन्द माझीले गत वर्ष चैतदेखि चलाएको अभियान भदौबाट रोकिएको छ। उनी यौनधन्दा रोकिएकाले अभियान रोकेको दाबी गर्छन्। नारायणगढका एक होटल व्यवसायी भन्छन्, 'प्रहरीले यौनधन्दा रोक्न होइन, पैसा कमाउन यस्तो अभियान चलाएका हुन्।'
एउटा शहर, एउटा ठाउँमा मात्र होइन, देशैभरि साना, ठूला शहरमा यौन व्यवसायले विकराल रूप लिइसकेको छ। प्रहरीले छापा मारेर केही जोडीलाई पक्राउ गर्दैमा यसमा नियन्त्रण हुँदैन। यौन व्यवसायलाई बेलैमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। यौनव्यवसायीले नै बेलाबेला नेपालमा पनि रेडलाइट एरिया तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब यस मागप्रति गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
अर्कै अर्थ लाग्ला नि!
तस्बिरबाटै चिनिने अनुहार हुन्, यी दुई। ठूलो पर्दामा चम्किएकी रेखा थापा र सानो पर्दामा ठूलो उचाइ बनाएकी दीपाश्री निरौलालाई कसले चिन्दैन र? तस्बिरमा हेर्नुहोस्, उनीहरू के गरिरहेका छन्! एकअर्काको आलिंगनमा...
उध्रियो मनको चोली
नेपाली सेलिब्रिटीको घरबार र तासको घर उस्तै हो। ढल्न बेरै नलाग्ने! विवाह नै नगरी एकै थलोमा गाँसबास बनाएका केटा साथीसँग सुषमा कार्कीको प्रेम टुटेको छ। अर्थात् 'उध्रेको चोली'मा नाचेर हिट...
छ महिनापछि बाहिर
पप गायिका साकिरालाई हिजोआज सार्वजनिक ठाउँमा बिरलै देख्न पाइन्छ किनकि अहिले उनी छ महिनाकी सुत्केरी छिन् र शिशुको स्याहारसुसारमा दत्तचित्त छिन्। हालै छुट्टी मनाउन हवाई पुगेकी थिइन् उनी, जहाँ उनका...
जय हो भ्यालेन्टाइन बाबा!
हावा, पानी र अन्नजस्तै अनिवार्य छ प्रेम। यो मानव जीवनको सबैभन्दा सुखद आयाम हो। प्रेमको अमरत्व र शाश्वताबारे असंख्य ग्रन्थ लेखिएका छन्, असंख्य गीत गाइएका छन्। केही वर्षदेखि नेपाली समाजले...